भूपरिवेष्टित खुट्टाहरू - Buy Nepali Book
प्रकाशक : हेमजा साहित्य प्रतिष्ठान
पहाडमुनि जरा गाडेर नबस्नु अब
पहाडको सियालमा अलमस्त ननिँदाउनु अब
पहाडको फेदिमा नटोलाउनु अब !
होश गर्नु !
जून हराएको रातमा
शुन्यताको गीत गाउन थाल्छन्
दिन माथि रात पोखिए जस्तै
रात म पनि पोखिन्छु भन्छ !”
(‘पहाड बग्छु भन्छ’ बाट एक टुक्रा)
SKU: 241 Category: Nepali Books Tag: Gajal
—क्षेत्र प्रताप अधिकारी
निष्प्रभ सजी उर्फ माधवराज पौडेलका ‘भूपरिवेष्टित खुट्टाहरु’ सुन्दर कविता बोकेर उकालो लागेको बेला कृष्णभीर भत्केको थियो देश । दिनभरी पहिरो हिँडेर रातभरी त्रासदी सुत्नुपर्ने कालखण्डमा पनि देश लेखिनै रहे सजी । जाँगरिलो सर्जकलाई सिर्जनाले पछ्याउँदो रहेछ । ‘भूपरिवेष्टित खुट्टाहरु’ पढेपछि यस्तो लाग्यो मलाई ।
ऊ , तेहाँ पहिरो गएछ
मनमा र पहाडमा
बस्ती पुरिए जस्तो छ
मायाँ दबिए जस्तो छ
ऊ, तेहाँ पहिरो गएछ !
सजीले जिन्दगीभर सपना बोक्ने काईंला दाइको थाप्लोमा परेको नाम्लोको छाप नजिकैबाट देखेका छन् । दुर्गम बस्तीहरुमा व्याप्त धेरै अनिकाल र थोरै फलिफाप लेखेका छन् ।
अनिलो तिहुनसित अलिकति ढिँडो निलेर पसलेको नुन खेपिरहे भरियाहरु । हरमा फाटेको भोटो र घरमा कोदाको रोटो नभए पनि मुखियाको कपडा र सामल बोकिरहे कमैयाहरु । आफूलाई अनन्त अस्थायी छाप्रोमा सुताएर मालिकको महल बनाईरहे ज्यामीहरु । अशान्त गाउँ बेसी र बस्तीमा असरल्ल यी र यस्तै यथार्थ शब्दचित्र हुन् ‘भूपरिवेष्टित खुट्टाहरु’।
गुलाफलाई गुलाफ नभने फुल्दा त गुलाफै फुल्छ । कवि सजीलाई गुलाफको शुभकामना ।
(‘भूपरिवेष्टित खुट्टाहरु’ भित्रको भूमिकाबाट एक टुक्रा)
“निष्प्रभ सजी समकालीन पोखरेली कविताका एक उदीयमान प्रतिभा हुन् । मैले उनलाई सुनेको छु । उनी आफ्ना कविताहरूमा बिम्बको प्रयोग गर्न रुचाउँछन् । “भूपरिवेष्टित खुट्टाहरू” उनको एक अद्भुत् विम्ब हो—प्रश्नोपनिषदीय—जहाँ उनी आफ्नो कविको सम्पूर्ण सीमा र संवेदना सहित अभिव्यक्त छन् । समकालीन पीडाहरू, बिसंगतीहरू, सन्त्रासहरू, आशा—निराशाहरू, ब्यंग र बिद्रुपताहरूमा उनी अक्षरहरूको अभीप्सा ओढ्छन् । उनी कवितामा कविताका लाशहरू गन्छन् । शायद सरलताभित्र बौद्धिकता र बौद्धिकताभित्र सरलता उनको बिशेषता हो । यस्तो लाग्छ उनी उत्तर आधुनिक युगका एक कवितात्मक कोलाज हुन्, जहाँ उनलाई आफ्नै अनुहारको खोजी छ ।”
(पुस्तक प्रकाशन मिति: २०६१)
Be the first to review “भूपरिवेष्टित खुट्टाहरू” Cancel reply